ရာဇ၀င်ထဲက သတို့သမီးဖြစ်တော့မှာလား ဧရာဝတီ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ရာဇ၀င်ထဲက သတို့သမီးဖြစ်တော့မှာလား ဧရာဝတီ…
ရာဇ၀င်ထဲက သတို့သမီးဖြစ်တော့မှာလား ဧရာဝတီ…
Posted by piti on Sep 13, 2011 in Critic, Environment | 14 comments
အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူစိတ်ဝင်စားမှုအရှိဆုံးထဲက တစ်ခုကတော့ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေလှောင်တမံစီမံကိန်းဆိုရင် မှားမယ်မထင်ဘူးနော်။ လူစိတ်ဝင်စားမှုအရှိဆုံးအချိန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ ဧရာဝတီသတင်းတွေကို နောက်ဆုံးဖွလိုက်တဲ့သူကတော့ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်း ပါ။ သူက မီဒီယာများ၏ မေးမြန်းမှုအပေါ် ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားရင်း ဖွလိုက်တာပေါ့။
(သတင်းအကျယ်တော့ သူများတွေ ဖော်ပြထားပီးလို့ လင့်ပဲပေးလိုက်တော့မယ်… http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10124:2011-09-11-18-18-04&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112)
မတော်တဆ ပျောက်ကွယ်သွားမှာစိုးနေရတဲ့ မြစ်ဆုံပုံလေးကို ဧရာဝတီသတင်းစာမျက်နှာကနေ ကူးယူဖော်ပြပေးထားတာပါ။ ခွင့်ပြုခွင့် ပေးမယ် ထင်ပါတယ်…
၀န်ကြီးပြောတာက အရပ်ထဲက အလုပ်ကြမ်းသမားတွေ ရန်ဖြစ်တဲ့အခါ စကားနိုင်လုသလိုပါပဲ။ ပညာသားမပါဘူး၊ လူယဉ်ကျေးမဆန်ဘူးလို့ ပြောရင် မလွန်ဘူးထင်တယ်။ ငါ့စကား နွားရ ဆိုသလို ငါဝန်ကြီး … ငါ့ထက်ပိုသိသူမရှိဘူး… ငါ့ကို ဆရာလာမလုပ်နဲ့ ဆိုသလို အခြောက်တိုက် ရမ်းနေတယ်ထင်တယ်။ ထားလိုက်ပါတော့…။ ကျနော် နည်းနည်းတော့ ဝေဖန်ချင်တယ်။ သူပြောတဲ့စကားတွေထဲက သဘာဝ မကျတာလေးတွေကိုပေါ့။
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအတွက် Third Party ဖြစ်တဲ့ BANCA အဖွဲ့အစည်းကိုလေ့လာခိုင်းတယ်လို့ပြောတယ်။
BANCA ကို တစ်သန်းခွဲနီးပါးလောက် လုပ်ခပေးပြီး ငှားထားတာဆိုတော့ ကိုးရိုးကားယား မလုပ်ရဲဘူး… အင်တာနက်မှာ တင်ထားတဲ့ report က စာမျက်နှာ ၅၀၀ လောက်ရှိတယ်… အဲဒီထဲမှာ ရေးထားတာ မလိုက်နာဘူးလို့ ပြောကြတယ်… BANCA က ဒီ report ကို တင်လို့ မရဘူး…စာချုပ်နဲ့ ငှားထားတာ၊ မင်းတို့ ဒါလုပ်၊ ပြီးရင် အဲဒီ report ငါ့ပေး… ဒါက Trade Secret ဖြစ်တယ် ပြောလို့မရဘူး လျှို့ဝှက်ထားတာ ဆိုပဲ…။ ၀န်ကြီးပြော သွားတဲ့စကားတစ်ခုပေါ့။
စီမံကိန်းဟာ Environmental အရရော၊ Tactically အရရော သေချာလေ့လာပြီးသား လုပ်တဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်ဘူး ဆက်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ၀န်ကြီးကဆိုတယ်လေ။ ဟုတ်ကဲ့။ သေချာလေ့လာပြီးသား လုပ်တဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လို့ ဘယ်လိုတွေ့ရှိချက်ဖြစ်ဖြစ် ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလား? လေ့လာချက်တွေက အားကုန်လုံး အကောင်းဘက်ချည်း ညွှန်းနေလား?
ဟုတ်ပါပီ။ အခု ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝါဒီသမားတွေက ကန့်ကွက်နေကြပီ။ ပြည်သူတွေက ကန့်ကွက်နေကြပီ။ အဲဒီတော့ BANCA က တင်ပြတဲ့အချက်ထဲမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို လုံးဝမထိခိုက်နိုင်ဘူး လို့ပဲ ဖော်ပြထားလား? ဒါမှမဟုတ် အနည်းငယ် ပဲ ထိခိုက်နိုင်မယ်ပြောလား? တကယ့် အစီရင်ခံစာထဲမှာ ဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲ? မြန်မာပြည်သူတွေရော အဲဒီစီမံကိန်းအတွက် တွေ့ရှိချက်တွေကို သိခွင့်မရှိနိုင်ဘူးလား? ဧရာဝတီဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသက်သွေးကြောလေ။” မြန်မာအစ တကောင်းက” လို့ တချို့က ပြောနေကြတယ်။ ကျနော့်အမြင် “မြန်မာအစ ဧရာဝတီက” ပါ။ ဧရာဝတီရှိလို့ ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ရှာပီးနေထိုင်ကြလို့ ကျနော်တို့ မြန်မာဖြစ်လာတာလေ။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေ သိခွင့်ရှိသင့်တယ်ထင်တယ်။
နောက်တစ်ခု ၀န်ကြီးပြောတာ “ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အခုမဂ္ဂါဝပ် ၁၅၀၀ ပေးတာတောင် ကုန်အောင် မသုံးနိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ ဘယ်သူက သုံးမှာလဲ။ သုံးစရာမရှိရင် market ရဲ့သဘောအရ ရောင်းစားရမှာပေါ့။ သုံးစရာမရှိရင် ရောင်းစားရမယ်။” ဆိုပါလား။ တော်လိုက်တဲ့ဝန်ကြီး… မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတွေရဲ့ စက်တပ်ဆင်အား အပြည့်အ၀ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဟုတ်ချင် ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်… လက်ရှိအချိန်မှာ စာရွက်ပေါ်က စာရင်းကိုပဲ မပြောသင့်ဘူး။ အမှန်တကယ် ဘယ်လောက်ထုတ်ပေးနိုင်သလဲ? မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံး လျှပ်စစ်မီးတွေ ထိန်ထိန်လင်းနေပီလား? တကယ်က နေပြည်တော်တစ်ခုပဲ အချိန်ပြည့်လင်းနေနိုင်သေးတာ။ ရန်ကုန် နဲ့ မန္တလေးတောင် လျှပ်စစ်မီး အပြည့်အ၀မပေးနိုင်သေးတာ အားလုံးအသိပါ။ တိုင်းပြည်ကို အမှန်တကယ်ချစ်ရင် မျက်ကမ်းမျိုးချစ်စိတ်မထားသင့်တော့ဘူး … ဒီအချိန်မှာ။ မျက်စေ့ဖွင့်ထားပီး အမှန်အတိုင်း မြင်သင့်နေပီ။ တကယ်ပိုရင်တော့ ရောင်းစားပါ။ မကန့်ကွက်ပါဘူး။ ပထမဆုံး ကိုယ့်ပြည်တွင်းက နေရာတိုင်း လျှပ်စစ်မီး အမှန်တကယ် အပြည့်အ၀လင်းဖို့ စေတနာသန့်သန့်နဲ့ လုပ်ပေးစေချင်တယ်လေ။ ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်မှာတောင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက ပြည်နယ်အချို့၊ ဒေသအချို့မှာ လျှပ်စစ်မီးအပြည့်အ၀မရလို့ အဆိုတင်သွင်းခြင်းတွေ၊ ဆွေးနွေးခြင်းတွေ လုပ်ခဲ့သေးတာ ၀န်ကြီးမေ့သွားလို့လားတော့မသိဘူး။ ကျနော်တို့ကတော့ သတိရနေသေးတယ်။
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အခုမဂ္ဂါဝပ် ၁၅၀၀ ပေးတာတောင် ကုန်အောင် မသုံးနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ ၀န်ကြီးစကားအရ လျှပ်စစ်မီးမရသေးတဲ့ ပြည်နယ်အချို့၊ ဒေသအချို့ကို တမင်မပေးပဲ ထားတာများလား? ” လျှပ်စစ်က ထုတ်ထားပြီးရင်လည်း သိမ်းထားလို့မရဘူး။ ထုတ်ထားပြီးရင်သုံးမှ မသုံးနိုင်ရင် ရောင်းမှ လို့ ပြောတဲ့စကားအရဆိုရင် ပိုလျှံနေပီးသားဖြစ်နေသလိုပဲလေ။
နောက်တစ်ခု … အခုပြောနေတဲ့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူး… မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကို အခြားနိုင်ငံတွေကို ဈေးပေါပေါနဲ့ ရောင်းထားတယ်။ လျှပ်စစ်မီးအပြည့် အ၀မပေးနိုင်လို့ စက်မှုဇုံတွေ၊ ဟိုတယ်တွေ အပါအ၀င် လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ နေအိမ်တွေက ပြည်သူတွေ နိုင်ငံခြားက ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီကို ဈေးကြီးကြီး ပေးတင်သွင်းပီး မောင်းနေရတယ်။ သုံးနေရတယ်။ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့နဲ့သာ လျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာတွေကို မောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြားငွေ ကုန်ကျမှု သက်သာနိုင်ဘူးလား? သေချာ စေတနာထားရင် ကန့်ကွက်ခြင်း ခံရမယ် မထင်ဘူး။
ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာ သုံးစွဲဖို့၊ လျှပ်စစ်မီးမရသေးတဲ့ ပြည်နယ်တွေ၊ ဒေသတွေကို ပေးနိုင်ဖို့၊ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းတွေမှာ သုံးဖို့ဆိုရင်တော့ လိုအပ်သလောက် ထုတ်ယူနိုင်မယ့် အတိုင်းအတာတစ်ခုဆိုရင် လက်ခံနိုင်အုံးမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုဟာက ကိုယ့်အရင်းအမြစ်ကို အသုံးချပီး သူများက အဓိက အကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ့် ကိစ္စနော်။ ကျွန်တော်တို့က free power 10% အလကားရတယ်။ ဒီကောင်က ၁၈၀၀၀ ထွက်ရင် ကျွန်တော်တို့က ၁၈၀၀ အလကားရမယ်။ free ရတယ်။ နောက်တစ်ခါ သူ့ဆီက လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ resource ကိုသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ၁၅% အရင်းထည့်ပေးရတယ်။ ကျွန်တော်တို့အရင်း၊ ကျွန်တော်တို့ free share 15% ရတယ်။ ဒီလျှပ်စစ်က Both Country သုံးခွင့်ရှိတဲ့အတွက် နှစ်နိုင်ငံစလုံး သုံးခွင့်ရှိတဲ့အတွက် ကျန်တဲ့ဟာကို ကျွန်တော်တို့ ကြိုက်သလောက် ၀ယ်သုံးလို့ရတယ်။ ၀န်ကြီးပြောသွားတဲ့စကားထဲမှာ ဘာမှ မဖြစ်စလောက် အမြတ်ကလေးကို ကြည့်ပီးပျော်နေတယ်လို့ထင်တယ်။ ကျန်တဲ့ဟာကို ကြိုက်သလောက်ဝယ်သုံးရင် တောင်းသလောက် ပေးရမှာပေါ့။ ဆင်ဖိုးထက် ချွန်းဖိုးကြီး ဆိုတဲ့စကား အလကားထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်။ စဉ်းစားသင့်တယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ယန်စီမြစ်ဟာ အရှည်ဆုံးမြစ်ပါ။ ကမ္ဘာ့အံ့သြဖွယ် ယဉ်ကျေးမှု တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့မြစ် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆို ယန်စီမြစ်ဟာ ကမ္ဘာမှာ ပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ့် အမွေအနှစ် ၁၀ ခုထဲမှာ ပါနေ ပါတယ်။ နောက်ဆိုရင် ၁၀ ခုကနေ ၁၁ ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတစ် ခုကတော့ ဧရာဝတီမြစ်ပါ။ လို့ ဆရာ မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) က ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ဖို့ ပြောသွားတာလေးလဲ ဖတ်လိုက်ရတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ ယန်စီမြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ တောင်ကြားသုံးသွယ်ရေလှောင်တမံ Three Gorges Dam ကြောင့် ပန်စီမြစ်နဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေဖြစ်နေလို့ ဝေဖန်ပြစ်တင်သံတွေ ကြားနေရ၊ တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း အန္တရာယ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံရနဲ့ ဖြစ်နေပီး နောက်ထပ် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်ယူဖို့ ကန့်ကွက်မှုတွေညံနေချိန် တစ်ခုခုဖြစ်ရင်တောင် သူ့နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရွေးချယ်လာတာပါ။
အရင်က မြန်မာပြည်တွင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတွေ မနည်းပါဘူး။ ဘယ်စက်ရုံတွေကို သေချာတွက်ချက်ပီးဆောက်ခဲ့သလဲ? ဘယ်စက်ရုံတွေက အမှန်တကယ် ဓါတ်အား ဘယ်လောက် ထုတ်ပေးနိုင်သလဲ? ပြယုတ်အနေနဲ့ပဲ ဖြစ်နေသလား? သေချာဝေဖန်ဆန်းစစ်ပီး မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်ရမှာ၊ ချမှတ်သင့်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေက ကျနော့်အမြင်ကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးထားတာပါ။ ကျနော့်လိုပဲ ရွာသူရွာသားထဲက စိတ်ပါသူတွေ၊ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
သူက ၀န်ကြီးလို့သာပြောတယ် … သူ့အတွေးက ကလေးတစ်ယောက်ဆီက ထောင်တန် (၁)ရွက်ကို အခြားလူကြီးတစ်ယောက်က ၁၀ တန် (၂) ရွက်နဲ့ညာပြီးလဲလိုက်တာကို အဲဒီကလေးက သူက (၁) ရွက်ပဲပေးလိုက်ရတယ် … ဟိုလူကြီးက ငါ့ကို (၂) ရွက်တောင်ပြန်ပေးတယ်ဆိုပီး ပျော်နေတဲ့ကလေးရဲ့ အတွေးနဲ့ဘာမှမကွာဘူး ….
ဒီလိုလူတွေနဲ့ ဒီအတိုင်းသာဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့နိုင်ငံကတော့ …….
ဟူး….. ရင်မောတယ်ဗျာ ……..
လူဆိုတာ အမှားမကင်းနှိုင်ပေမယ့် အရေးကြီးတာက ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်လုံဖို့ပါ
Very stupid minister.
စိတ်ပျက်ပါတယ်။ဧရာဝတီ ကို နှမျောမိသလို။ကျွန်မတို့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လဲ ထွက်သမျှသဘာဝဓာတ်ငွေ့ အကုန်လုံးတရုတ်ပို့ နေတယ်။
အများပြည်သူသုံးနေရတာ မီတာတစ်ယူနစ်ကို ၄၅၀ ကျပ်နှုန်း၊စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးမပြောတတ်တဲ့ ဝန်ကြီးပါလား။ဘယ်လို သုံးမကုန်တဲ့ ယူနစ်တွေပါလိမ့်။လျှောက်ပြီးရမ်းသန်းပြောနေတယ်။
သူတို့နေတဲ့အိမ်တွေမှာ မီးတွေ လင်းထိန်နေလို့ တခြားမြန်မာပြည်တွင်းက နေရာတွေမှာပါ လင်းနေတယ်လို့ထင်တဲ့ ရေတွင်းထဲက ဖားသူငယ်ဝန်ကြီးမို့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်…
၀န်ကြီးသာဆိုတယ် ဇာတ်ထဲက၀န်ကြီးလောက်တောင် မြန်မာပြည်သူတွေကို ပျော်ရွှင်ဖို့ လုပ်ပေးမယ့်ပုံမပေါ်ပါဘူး….
နိုင်ငံခြားမှာသာဆို ဒီလို ငါ့စကား နွားရပြောလို့ကတော့ ခံရပီသာမှတ်
၀ိုင်းထောက်ကြတာနဲ့ ရှက်ပြီး နှုတ်ထွက်သွားရမှာ…
အခု ၀န်ကြီးကတော့ အရှက်ရှိမယ် မထင်ပါဘူး
သူ့လက်အောက်မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒုဝန်ကြီးဟောင်း ဦးမျိုးမြင့်ကလဲ ထချ နေပြီ
အမှတ် (၂) လျှပ်စစ်ကလဲ ကျေးရွာ ၆၀၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့အထဲမှာ အစိုးရမီးကို ရတာ ၂၁၉၄ ရွာပဲ ရှိတယ် လို့ ဖွင့်ချ ပြန်ပြီ
သူပြောတာက မဂ္ဂါ ၁၅၀၀ သုံးလို့တောင် မကုန်ဘူး ဆိုတဲ့ စကားတွေလဲ လွဲနေပြီ
သူ့လမ်း သူလျှောက်တော့မှာပါ (သူ့ပထွေး တ၀မ်းကွဲ တွေ သူ့ကို ဘယ်လို ကယ်ကြမလဲ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့)
“အခု တစ်လလောက်အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ ဧရာဝတီရောဂါနဲ့ အမီလိုက်နေသူများရဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ ကာတွန်းတွေ၊ အခုဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ဖို့ ရှိပါသလား၊ ဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီလဲလို့ မေးပါတယ်။
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်ပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်ပါဘူး။ ဘယ်အဆင့်ထိ ရောက်နေပြီလဲဆိုတော့ အခုချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့က အကြိုအင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ စီမံကိန်းတည်ဆောက်မယ့် ဧရိယာကို ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းတွေ၊ စီမံကိန်းဧရိယာထဲမှာ ရှိတဲ့လူတွေကို ပြန်လည်နေရာချထားတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ၊ နောက်တစ်ခါ လုပ်ဆောင်စရာရှိတဲ့ စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းတွေ စတင်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ မိုးတွင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီနေရာကလည်း weather window အရ တစ်နှစ်မှာ ခြောက်လလောက်ပဲ လုပ်လို့ရတဲ့အတွက် မိုးတွင်းမှာတော့ လုပ်ငန်းရပ်နေတယ်။ နွေရာသီ open season စတာနဲ့ ဒီလုပ်ငန်းကို ဆက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းကို ကျွန်တော်တို့စလုပ်တဲ့ အချိန်ကစပြီးတော့ ရှစ်နှစ်အတွင်းမှာ အပြီးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နောက်မဆုတ်ပါဘူး။
အဲဒီတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က ကန့်ကွက်နေလို့ နောက်ဆုတ်မှာလားလို့ မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်။
UN က ထပ်မံစစ်ဆေးဦးမှာလား၊
UN နဲ့ ဒီကိစ္စနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ဆက်ပြီးအောင်မြင်အောင် လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တာ ကိစ္စတွေကတော့ နောက်မှရှင်းပြမယ်”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
လက်တွေ.နဲ.မနီးစပ်ဘဲ-ပရမ်းပတာ-ငါတကောကော ရှောက်ပြောနေတဲ့ ဒီလူမျိုးတွေအစိုးရအဖွဲ.ထဲမှာရှိနေတာကိုက တိုင်းပြည်နစ်နာတယ်။ အစိုးအဖွဲ.လဲသိက်ခါကျတယ် ။
ပြည်သူတွေကို စာမတတ်ဘူး၊ငါတို.ပြောသမျှယုံလိမ့်မယ် ထင်နေကြတုံးဘဲလား????
“မိုးတွင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီနေရာကလည်း weather window အရ တစ်နှစ်မှာ ခြောက်လလောက်ပဲ လုပ်လို့ရတဲ့အတွက် မိုးတွင်းမှာတော့ လုပ်ငန်းရပ်နေတယ်။ “မိုးတွင်းကာလမို့လို့ ရပ်တာထက် ကေအိုင်အို (လဖိုင်ဂိတ်)က တားဆီးထားတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းရပ်နားထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အခုမဂ္ဂါဝပ် ၁၅၀၀ ပေးတာတောင် ကုန်အောင် မသုံးနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ ၀န်ကြီးစကားဟာ ဘယ်လိုသဘောနဲ့ပြောသလဲတော့မသိဘူး
ဧရာဝတီကို သတ်တဲ့ လူဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သတ်သလောက် အပြစ်ကြီးပါတယ်။
ဧရာဝတီကို သတ်တဲ့ လူဟာ ပြည်သူတွေကို သတ်တာနဲ့တူပါတယ်။
ဧရာဝတီကို မြတ်နိုးတတ်ဖို့ ဥာဏ်မမှီရင်လည်း လေ့လာကြပါ၊ သင်ယူကြပါ။
ဧရာဝတီ ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းတွေ ပြောနေကြတာ နိုင်ငံရေးလုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူး။
ဧရာဝတီကို သတ်တယ်ဆိုတာဟာ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်ကို သတ်တာနဲ့ အတူတူပဲလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ ကျနော် အထက်မှာ ဆိုထားသလို “မြန်မာအစ တကောင်းက” မဟုတ်ပါဘူး “မြန်မာအစ ဧရာဝတီက”ပါ။ ဧရာဝတီကို အမှီပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ မြန်မာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်သွေးကြောဟာ ဧရာဝတီပါ။ ကိုယ့်အသက်သွေးကြောကို
သမိုင်းမှာ အမဲစက် အစွန်းအထင်း ခံချင်ရင်တော့………
ရှစ်နှစ်အတွင်းပြီးအောင်လုပ်မှာပါတဲ့… နောက်မဆုတ်ပါဘူးတဲ့..။ နောက်မဆုတ်နဲ့ ကိုကံချွန်တော့ ဖြစ်နေပြီ….။
ဒီမြစ်ဆုစီမံကိန်းကိုသဘောမတူတာ ကချင်ပြည်နယ်သားတွေတင်မက -တနီုင်ငံလုံးပါ။
ဒါကိုမှဆက်လုပ်အုံးမယ်ဆို၇င် ပြည်သူ့အစိုး၇ အစစ်ဘယ်ဟုတ်တော့မှာလဲ ။ီံ